MyanmarLensman.com တွင် ဓါတ်ပုံ၊ စာသား၊ ဖိုင် စသည့် မည်သည့် Content မဆို ရေးသား (သို့) Upload လုပ်မည်ဆိုပါလျှင် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။
၁) နိုင်ငံရေးနှင့်နှီးနွယ်သော၊ အခြားသူများ၏ အရှက်သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ထိခိုက်စေသော၊ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံထားသော၊ ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းသော၊ အကြမ်းဖက်မှုကို အားပေးသော၊ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် မဆီလျော်သည့် လိင်အသားပေးသော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ ဒေါသသင့်သော Content များနှင့် ဥပဒေ ချိုးဖောက်သော Content များကို ရေးသားခြင်း (သို့) Upload လုပ်ခြင်း လုံးဝ မလုပ်ရပါ။
၂) MyanmarLensman.com သို့ ရေးသမျှ၊ တင်သမျှ Content (Message) များအားလုံးသည် ရေးသားသူ၏ အမြင်ဖြစ်သဖြင့် ရေးသားသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။ MyanmarLensman.com Owner/Admin များနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်သဖြင့် လုံးဝ တာဝန်မယူပါ။
၃) သူတစ်ပါး၏ ဓါတ်ပုံ၊ စာသား၊ ဖိုင် စသည်တို့ကို မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ပြီး ရေးသားခြင်း (သို့) Upload လုပ်ခြင်း လုံးဝ မလုပ်ရပါ။
၄) ကြော်ငြာနေရာဝယ်ယူထားသူ (သို့) Sponsor များမှအပ မည်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (သို့) Website (သို့) Product/Service ကိုမျှ ကြော်ငြာခြင်း၊ Promotion လုပ်ခြင်းများ လုံးဝ လက်မခံပါ။
၅) MyanmarLensman.com Owner/Admin များသည် MyanmarLensman.com Website မှ မည်သည့် Content ကိုမဆို မည်သူ့ကိုမှ မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မျှ ပေးရန်မလိုဘဲ (ချွင်းချက်မရှိ) အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်ဖယ်ရှားခွင့်ရှိသည်။
၆) MyanmarLensman.com Owner/Admin များသည် MyanmarLensman.com Website မှ မည်သည့် Member ကိုမဆို မည်သူ့ကိုမှ မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မျှ ပေးရန်မလိုဘဲ (ချွင်းချက်မရှိ) အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်ဖယ်ရှားခွင့်ရှိသည်။
၇) Photo များကို အခြား Website များတွင်သော်လည်းကောင်း၊ Article များတွင်သော်လည်းကောင်း Photographer အား Credit ပေး၍ ယူငင်အသုံးပြုကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
၈) MyanmarLensman.com သို့ Upload လုပ်မည့် Photo များသည် မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားသောပုံများသာဖြစ်ရမည်။ Image Copyright အား မိမိဘာသာ ထိန်းသိမ်းရမည်။
အထက်ပါအချက်များကို ကောင်းစွာ ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး သဘောတူလက်ခံပါသည်။
By uploading content to MyanmarLensman.com you must agree to the following:
1. You agree, through your use of this social network, that you will not use this site to post any material which is related to political things, knowingly false and/or defamatory, invasive to another person's privacy, vulgar, abusive, sexually oriented, obscene, threatening, knowingly innaccurate, hateful, or otherwise violative of any law.
2. All messages express the views of the author. The owners of MyanmarLensman will not be held responsible for any material or any message.
3. You agree not to post any copyrighted material without the permission of the copyright holder.
4. You agree not to post any material that is meant to be promotional for any other services, products, or websites except Sponsors/Advertisers who had bought Ads space(s). This includes hyperlinks, images and "Spam" related material.
5. MyanmarLensman reserves the right to remove any material from this site for any reason without explanation.
6. MyanmarLensman reserves the right to ban any member from this site for any reason without explanation.
7. Photos may be featured or used within any website or article with credit given to the photographer.
8. Photos must be self-taken and the photographer retains their images copyrights.